Shiinaha Adblue Jerry Weelka Weelasha leh oo leh warshad biiyaha iyo alaableyda | Kaiguan
Markaad doorato weelkeena adblue Jerry Can Containers ee biiyaha leh
, waxaad dooraneysaa xirmo loo dhisay inay iska caabbiso baakadka kiimikada, nadiifinta gaaska dabada gawaarida.
Awood Cabbirka furitaanka (mm) Tirada (pc) Cabbirka badeecada (mm) Cabbirka baakadka (mm)
Faa'iidooyinka adblue Jerry Can Containers, oo lagu nadiifiyo gaaska dabada gawaarida.
Waa la laaban karaa ilaa keyd ahaan, iyadoo si weyn hoos ugu dhigeysa qadarka keydinta ee loo baahan yahay marka la barbar dhigo daasadaha birta ah iyo weel caag ah oo adag.
Waxaa loogu talagalay cusbi si loo abuuro weelal leh asiidh ka sareeya, alkali, biyo, huur iyo u adkaysi qabow.
Xirmooyinka fudfudud iyo fududahay in laqabto ee bixiya shaqeyn aad u fiican oo waxaa loo isticmaali karaa noocyo kala duwan oo qalab ah si sahlan oo ku habboon u daadinta waxyaabaha ku jira.
Badeecadan bey'ada ku habboon, weelka gudahiisa kama soo baxo gaas aan waxyeello lahayn inta lagu jiro gubashada iyo sanduuqa baakadaha dusha sare ayaa loo kala saari karaa yaraynta, dib u isticmaalka iyo dib-u-warshadaynta.
Qiyaasta 1 ilaa 25 litir
Isku-urursiga Cubitainer wuxuu ka kooban yahay Cube la buufiyey oo lagu dhejiyay baako-baakad ka badan
Soo jiido tufaax oo ku shub saabuun, jel iyo alaabta nadiifinta.
Gelinta LDPE; Guntinta sabuuradda
Si fudud u rar, xamili oo ku shub.
Isku-dhafan oo khafiif ah, yareeya kharashka gaadiidka iyo kharashka kaydinta;
Dareeraha qulqulka qulqulka joogtada ah ee ka socda shaashadda is-faaruqinta.
Buuxiyo qeexitaanka FDA.
Hore: Baakadaha Adblue
Xiga: Isku-darka 5 litir ultrasound gel cubitainer